हो, खस–आर्यभित्रबाट पनि ठीक काम गर्न बढीभन्दा बढी मानिस अगाडि आउनुपर्छ । तर उनीहरू कम हुँदाचाहिँ अरू सत्तरी प्रतिशत नेपालीबीचबाट अगाडि आउनेहरूले नेपाली समाजको नेतृत्व लिनै नसक्ने र लिनै नहुने हो ? वास्तवमा आजको हिन्दु उच्च जातवादी दलाल पुँजीपति वर्गीय शासक वर्गले व्यक्त नगरीकन कार्यान्वयन गरिरहेको कथित जातीय श्रेष्ठताको अघोषित रणनीति बाबुराम भट्टराईमार्फत चुहिन पुगेको छ । त्यसका निम्ति भट्टराई धन्यवादका पात्र हुन् । तर यो निकै गम्भीर र खतरनाक भविष्ययात्राको उद्घाटन हो । प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ ०८:१४
श्रावण १३, २०७६ सुषमा थापा
अझ यी खेलाडीहरूको पीडा सामाजिक सञ्जालहरूमा र व्यक्तिगत रूपमा सुन्दा र हेर्दा म पनि बिचलित भएकी छु । के प्रक्रिया मापदण्ड र आधार थियो, जहाँ यी खेलाडीहरू अट्न सकेनन् ? आम नेपाली खेलप्रेमीको हैसियतले यसको जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ हामी सबैले पाउनुपर्छ । यो विवादास्पद छनोट प्रक्रियाले भविष्यमा सचेत हुने संकेत देओस् या नदेओस्, तर पनि उनीहरूप्रतिको यो अपमानजनक व्यवहारबारे बोल्नु मैले आफ्नो धर्म ठानेकी छु ।
तपार्ईंहरूलाई लाग्ला— विदेशिएको मान्छेलाई किन टाउको दुख्यो ? तर म झन्डै २ दशक खेलकुदमा बिताएकी खेलाडी हुँ । उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा सहयोग पनि गरेकी मान्छे हुँ । यी खेलाडीहरूको पीडाले मलाई पनि दुखायो । अपमानले मलाई पनि लज्जित बनायो । म मौन रहन सकिनँ । विदेशमै रहे पनि खेलप्रेमीका प्रश्नको झटारोले मलाई पनि हानिरहेको छ । किनकि म पनि त्यही बारीकी हुँ ।
आज देशमा गणतन्त्रको अभ्यास हुँदैछ । नयाँ युगको सुरुवात भएको छ । परीक्षार्थीले चाहेको खण्डमा कुन विषयमा कति नम्बर आयो भनेर हेर्न पाउने अधिकार छ, आज । यही प्रश्नको जवाफ विनिता, मञ्जु, नेविका, कोपिला लगायत खेलाडीहरूले खोजिरहेका छन् । तपाईहरू कुर्सीमा बसेको मान्छे । तपाईहरूभन्दा माथि पनि ठूला टाउकाहरू छन् । यदाकदा कुनै परिस्थिति या प्रभावले ठूलो टाउकाहरूको तालमा लय मिलाउनुपरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो भने तपाईहरूप्रति मेरो सहानुभूति छ । तपाईको धर्म— कम्तीमा पनि सुमधुर सुरमा ताल र लय मिलाउनुहोस्, बेसुरको तालमा होइन ।
प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ ०८:१३